ပွဲချိန် ၉၁ မိနစ်မှာ အမိုက်စား မြေမကျဘောကန်သွင်းပြီးနောက် ရော်နယ်ဒိုကို အတ္တလန္တာနည်းပြဂက်စ်ပါရီနီ ဘာပြောခဲ့လဲ? – Play Maker Sports Journal
ပွဲချိန် ၉၁ မိနစ်မှာ အမိုက်စား မြေမကျဘောကန်သွင်းပြီးနောက် ရော်နယ်ဒိုကို အတ္တလန္တာနည်းပြဂက်စ်ပါရီနီ ဘာပြောခဲ့လဲ?
ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဂက်စ်ပါရီနီက “ပွဲပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။သူကတကယ့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးပါ။တစ်ချို့ကသူ့ကိုပြဿနာကောင်လို့ခေါ်ကြတယ်။ရှိဖို့ကောင်းတဲ့ပြဿနာပေါ့။ပထမပိုင်းမှာဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဂိုးသွင်းခဲ့ပြန်တယ်။ပွဲပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ ‘အီတလီမှာဆိုငါတို့ဘယ်လိုပြောကြလဲသိလား။ငရဲသွားလိုက်”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြဲခ်ိန္ ၉၁ မိနစ္မွာ အမိုက္စား ေျမမက်ေဘာကန္သြင္းၿပီးေနာက္ ေရာ္နယ္ဒိုကို အတၱလႏၲာနည္းျပဂက္စ္ပါရီနီ ဘာေျပာခဲ့လဲ?
ပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဂက္စ္ပါရီနီက “ပြဲၿပီးေတာ့ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႔စကားေျပာခဲ့တယ္။သူကတကယ့္ကိုႀကီးက်ယ္တဲ့ကစားသမားတစ္ဦးပါ။တစ္ခ်ိဳ႕ကသူ႔ကိုျပႆနာေကာင္လို႔ေခၚၾကတယ္။ရွိဖို႔ေကာင္းတဲ့ျပႆနာေပါ့။ပထမပိုင္းမွာဂိုးသြင္းခဲ့တယ္။ဒုတိယပိုင္းမွာလည္းဂိုးသြင္းခဲ့ျပန္တယ္။ပြဲၿပီးေတာ့သူ႔ကိုကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ ‘အီတလီမွာဆိုငါတို႔ဘယ္လိုေျပာၾကလဲသိလား။ငရဲသြားလိုက္”လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဘောအနာခံပြီး ချေပဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ အေဂျက်စ်စတားဒူဆန်တာဒစ် နောင်တရနေမလား?